US / 16A (3.6KW) Vagadziri & Vanopa | China US / 16A (3.6KW) Fekitori
Level2 5meter 16A Type 1 EV Chaja yeMagetsi Vehicle Yekuchaja Cable
China Yakachipa mutengo China EV Chaja, Magetsi Motaja Yekuchaja Cable, Tinogona kupa vatengi vedu zvakanakira zvakakwana muhunhu hwechigadzirwa uye mutengo wekudzora, uye ikozvino isu tine huwandu hwakazara hwevhu kubva kune anosvika zana emafekitori. Sechigadzirwa chinogadziridza nekukurumidza, isu tinobudirira mukugadzira akawanda emhando yepamusoro zvigadzirwa zvevatengi vedu uye kuwana mukurumbira wepamusoro.
Level 2 EV Cheji Yuniti ine Type 1 Outlet 16A 3.5kw
Isu tinotsigira vatengi vedu nezvakanaka zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye epamusoro nhanho masevhisi. Kuve nyanzvi yekugadzira mune ino chikamu, isu ikozvino tawana rakabudirira rinoshanda ruzivo rwekushanda mukugadzira nekutarisira kweOEM Supply China 16A SAEJ1772 Electric Car Chargeing Unit ine Type 1 Cable, Isu tinochengetedza panguva yakakodzera yekuendesa mashedhi, matsva dhizaini, yepamusoro mhando uye pachena kune edu vatengi. Mota yedu inofanira kunge iri yekupa zvinhu zvemhando yepamusoro mukati menguva yakatarwa.